La kulan Ubuntu All-in-One oo ka socda system76 (tartanka iMac?) | Laga soo bilaabo Linux
Warar xiiso leh oo aan ka akhriyey degel ku dhex yaal beesheenna, aadanaha. Markan kama iman Jako (kuwaas oo aan horay uga soo qaadannay dhowr qodob), laakiin wuxuu ka socdaa tifaftiraha cusub ee bogga: Manuel Alejandro.
1 Waa maxay Nidaamka 76?
2 Kombiyuutarkii ugu horreeyay ee hal-ku-dhig ah oo Ubuntu horay loo sii rakibay ayaa la iibiyay.
Waa maxay Nidaamka 76?
Nidaamka 76 waa shirkad la aasaasay 2005 oo u heellan soo saaridda iyo iibinta kombuyuutarrada gacanta, desktops-yada iyo server-yada. Dabeecaddiisa ugu weyni waa taas alaabtooda oo dhami waxay la yimaadaan si gaar ah Ubuntu horay loo rakibay, waxaa loo aqoonsan yahay inay leeyihiin waxqabad iyo tayo wanaagsan.
Kombiyuutarkii ugu horreeyay ee hal-ku-dhig ah oo Ubuntu horay loo sii rakibay ayaa la iibiyay.
Munaasabaddan awgeed Nidaamka 76 ayaa nagula yaabay kumbuyuutarkiisii ​​ugu horreeyay ee hal-ku-dhig ah. Muuqaal qurux badan oo 21.5 ″ HD ah oo lagu xidhay muraayad gees ilaa gees ah iyo dhinaca aluminiumka oo la jaro Laakiin haddii aad u malaynayso inay taasi kugu filnayn, "Sable Dhameystiran", oo ah magaca lala yaabay yaabkan, wuxuu hayaa hub xoog leh gudaha.
Laga bilaabo qiimaha ah $ 799 Sable wuxuu na siinayaa astaamaha soo socda:
Muuji 21.5 ″ HD LED Backlit oo leh xallinta 1920 x 1080
Mid ka mid ah Quad-core Intel Core i5 3470S CPU @ 2.90 GHz
Kaar HD Graphics ah 2500 sawir gacmeed
Mid ka mid ah 250 GB SATA II 6 Gb / s 16 MB Cache HDD
Hadlayaasha, kaamirada websaydhka iyo makarafoonka is dhexgalka
Maqalka / dibedda
Dabcan Ubuntu qaabkeedii ugu dambeeyay 12.10
Maqnaanshaha WiFi ee qaabka aasaasiga ah waa niyad jab, laakiin waxaa lagu dari karaa "dheeraad" ah $ 35 iyo haddii qeexitaannada aasaasiga ahi na qancin waayaan, marwalba waan isdhaafsan karnaa qaybo iyo qaybo si aan ugu haboono baahiyaheena. Nidaamka 76 wuxuu na siinayaa shey dhammaystiran tan, taas oo u dhaxaysa xulashada beddelka processor-ka jiilka saddexaad ee Intel Core i7, kordhinta xusuusta RAM illaa 16 GB, ama ku darista disk adag oo sidoo kale lagu beddeli karo HDD a SSD iyo ilaa ugu badnaan 750 GB.
Sable waa kombiyuutar aad u qurux badan oo (aragti ahaan ugu yaraan) ka dheereeya, ka jaban, ka sii ballaadhin kara, uguna fiican Ubuntu marka loo eego 2011 iMac oo ka mid ah tifaftirayaasha OMGUbuntu!
Ka sii cajaa'ib badan fekerkeyga (iyo faylalka shaqadeyda) waa taas, in kastoo System76 uu yahay tafaariiqle khaas ah (oo macnaheedu yahay in kharashyada ay ka sarreeyaan kuwa kuwa wax soo saara) dhammaan-in-ka-mid ah ee na soo bandhigayaa uu yahay mid la tartami karo, xitaa haddii uusan lahayn WiFi, disk disk, ama qalabka aqbashada.
Saber waa la iibinayaa laga bilaabo hadda websaydhka rasmiga ah ee Nidaamka 76. Marka waa maxay, miyaad ku faraxsan tahay inaad mid iibsato?
Oo halkan maqaalka ayaa ku dhammaanaya 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » La kulan Ubuntu All-in-One oo ka socda system76 (tartanka iMac?)
waa mid aad u wanaagsan: D. laakiin aniga waxay ila tahay inay ilaaween inay isbarbar dhigaan wax muhiim u ah wiilasha ... iMac wuxuu la yimaadaa Geforce 650M ama 680MX ... marka awooda garaafka, waxaan u maleynayaa inay ka cadahay in iMac uu kumbuyuutarkan u tuuray cadaabta xD, Ma aqaano in iMac uu la imaan doono muuqaalka isha, maxaa yeelay markii aan galay bogga wuxuu yiri waxay ku sii deynayaan mid cusub xD, intaas ka sokow, waxay umuuqataa mid aad u fiican
Waxaan u maleynayaa inaad dhigan kartid kaarkaan aakhirkana, weli wuu ka jaban yahay ..
Hagaag, xulashooyinka kujira bogga kumajiraan badalida garaafka, waxaan rajeynayaa in hadhow la heli doono. Kuwa ay ku jiraan waxaa ka mid ah moodeellada kale ee miisaska, sidoo kale waxaa habboon in la fiiriyo
iyadoo la raacayo waxa bogga ku qoran, waxaad geli kartaa oo kaliya 4000HD intel, si kastaba, ma ihi taageere mac, runtiina waxaan la socdaa vaio <3 hahaha
Waxaan weydiin lahaa in halkii Ubuntu ay la imaan laheyd Kubuntu ama Suse + KDE
Waad bedeshay, waa wax fudud. Faa'iidada ayaa ah inaadan bixinaynin rukhsadaha isticmaalaha, ama wax la mid ah.
Nasiib darrose halkan Argentina ma haystaan ​​gaarsiin, oo keydka alaabooyinka la soo degsadaa waa wax aan macquul ahayn, haddii aysan Nidaam76 dhigin warshad dalka ku taal, taas oo aan u malayn maayo inay tixgelin doonaan qaab-dhismeedka hadda jira.
Ama leh Debian Net Ku rakib XD
(ama uguyaraan waa waxa aan kuu soo diri lahaa 🙂)
Waa hagaag, waxba, qaab, pendrive leh qaybintaada aad jeceshahay iyo hawsha. Mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee barnaamijka bilaashka ah ee sidoo kale, iyada oo ah qaybinta ku saleysan Ubuntu (Kubuntu), uma maleynayo inaan dhibaato u geysan doono darawalnimada. Iyadoo Suse + Kde…. Ma hubo mar dambe
Aad ayey ufiican tahay in la fiiriyo… qiimihiisuna wuxuu u muuqdaa mid macquul ku ah waxa ay bixiso.
In kasta oo aanan saaxiib fiican la ahayn kooxaha AIO (waxaan door bidaa inaan awood ku haysto dheriga aniga agtiisa ah) waan jeclahay kan 😀
Ah, qeexitaannada diskku waa SATA III 6Gb / s
Waa markii ugu horreysay ee aan arko koox la socota Ubuntu Pre-Installed oo keenta nooca ugu dambeeyay.
PS: Waxaan iibiyaa isticmaalka yar ee iMac, sababta aan u doonayo inaan u iibsado qalab cusub
Wow, oo leh wifi iyo tera HDD ah waxay ku kacaysaa $ 873 (11300 oo pesos Mexico ah), wali waa qiimo tartan laakiin aniga ima qancinayo
Oo meeye akhristaha DVD-gu: /
Oo leh 500 Gb + DVD + Wifi + Keyboard $ 929 Ma xuma.
La heli karo DockBarX 0.90.3